Kuberekwa muvechiri kuyaruka | Dzidzo | Mapeji evaravara ehurukuro
Mukuyaruka, rega uende asi upe rubatsiro
Kuchengetedza mambure ekuderera kusina
Haana kusangana nevabereki vasina kugadzirira, mushure mezvose, munhu anogona kukwanisa kuyeuka nguva yake yekukura, uye zvakadaro anonzwa sekusununguka kune vakawanda - kazhinji haasi mumwe anonzwa akaoma semubereki uye panguva imwechete saka asingabatsiri. Zvechokwadi tiri kutaura pamusoro pekuyaruka, nguva huru yekubvisa zvakanyanya, iyo inetso chaiyo yevana, asi zvakadaro kune vabereki.
Kuberekwa ndiyo inokosha yekusimudza chikamu
Vana vanova vechidiki uye pakupedzisira vanova vakuru vakuru. Vabereki vanowanzotambudza naro uye kunzwa kuti mhuri iri kuputsa hakuiti kuti zvinhu zvive nyore.
Kuberekwa kwemwana wako pachako
Rega kuenda kare muchikoro chechikoro
Kana mwana aberekwa, hapana anofunga kuti chimiro chichaita tsika yaro chaiyo mumwedzi mishomanana uye ichatarisa kufambira mberi kwose pakurega kuenda.
Kubvira pamatanho ekutanga kusvika pavanopinda chechikwereti - kuparadzana kwevabereki nevana kunouya pazvikamu, asi hazviregi kumira.
Yokutanga kuparadzaniswa kwenguva refu kunouya kune yakapfuura uye rwendo rwemazuva akawanda kune Landschulheim mukirasi shanu. Vana vazhinji vanotya, asi vabereki vari kunetseka: Kucherechedza kwakakwana kunobhadharwa kumwana wangu here? Zvakadini kana zvinorwadza kana kurwara? Achafamba sei kana zvimwe vamwe vachimukuvadza parwendo?
Zvose izvi kutya kwekutendera kuenda, zvakadaro, kuvanza vabereki zvakanaka kubva kuvana uye pane kunyanya kuzvivimba mupfungwa iwe unogona kuzviita! Zvakaipa chaizvo kudzivisa vana kunze kwekutya, saka vanovapa ruzivo rwakakura uye rwakasiyana-siyana, mikana yekusimudzira uye zvakawanda zvinonakidza!
Uye rimwe zuva iye achave aripo! Kuberekwa kunotanga kuuya nemasikisi maduku, mwana anokakavhiringidza, kuti mutumwa muduku munyoro dzimwe nguva angashanduka kuva mhuka. Vakomana, asiwo vasikana, kamwe-kamwe vanobva vawedzera, vachizviparadzanisa kune vamwe vose vemhuri.
Iyi nhanho inorwadza, asi inokosha pakuvandudza kwakanaka. Nharaunda yevamwe Shamwari inowedzera simba pamusoro pekuregedza kuenda kumhuri. Zvinofanirwa neshamwari pamusoro pako zvinova zvakakosha kudarika maonero evabereki, zvakanyanya.
Nokuti kunyange kana vana vasingadi kugara vachida kuzvibvuma, vachiziva kuti kuchengetedzwa kwemusha kunzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka kunovasimbisa zvikuru. Vachiri kuyaruka vanoda kunzwisisa sezvavasati vambotanga, uye kazhinji vanoita zvoupenzi zvokuti kunzwisisa kunoda kuva simba rekuita vabereki.
Vana vachiri kuyaruka vanorwira rusununguko, kwete kungoita muviri chete, sekugara kwenguva refu, kuenda kunze uye kudzoka, asiwo nokuda kwekusununguka kwemaonero avo, maonero avo uye zvido zvavo.
Kurega kuenda panguva yekuyaruka - asi nguva dzose uvepo kune vana
Izvi zvinogona kutanga nekunaka kwemimhanzi uye kuguma munguva yeInternet.
Zvechokwadi haufaniri kushivirira vana. Mitemo yakajeka inogona kubatsira kusimbisa rusununguko nekuchengetedza vechidiki kunyange zvakadaro. Vabereki vanogona kubatsira zvakawanda munguva ino: chiyeuchidzo cheAbnabelung avo.
Chii chingave chiri nani? Chii chakaitwa nevabereki vako zvakanaka uye zvakarurama? Chii chandingada kuita pamwe chete nezvimwezve? Ndinoda sei kusimudzira mwana wangu kuitira kuti awane iye oga?
Vana vaduku vanoda ruzivo rwavo uye vabereki vanofanira kungoshandisa marara ekuchengetedza kuti vabate vana vavo mumatambudziko akaipa.
Uye zvekupedzisira asi zvakakosha zvikuru: Usatora chinhu chero chipi zvacho muchikamu ichi, zvakajairika kuti vana vapandukire vabereki vavo, uye zvino!